18 / 05 / 2021 18 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 864 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, ကြောင်နက်, ဓါးရွက်, Daredevil, Deadpool, ဆရာဝန် Octopus, Firestar, Ghost-Spider ဖြစ်သည်, Iceman, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego မှ marvel, Mark Stafford, Marvel, မိုင် Morales, သေးသေးလေး, Reddit, Spider-Man, ပင့်ကူ-အမျိုးသမီး, လူ့ Torch, အပြစ်ပေးသူ
Lego Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle များပြားလှသောအသေးစားဓာတ်ပုံများပါရှိသည် - သို့သော်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့မှရေးဆွဲခဲ့သောမူလစာရင်းတွင်တစ်ခုလုံးပါဝင်သည်။
အဆိုပါ အသစ် - ထုတ်ဖော် Marvel မော်ဒယ်လ် (အမြင့်နှင့်အပိုင်းအစနှစ်ခုလုံးတွင်အများဆုံးအချိန်၏အကြီးမားဆုံးစူပါဟီးရိုးအစုံဖြစ်သည့်) 25 minifigures တွင်နာရီများမှစတင်သည် Spider-Man Doc Ock, Daredevil နှင့် Blade တို့နှင့် Miles Morales တို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်နာ Mark Stafford ကတကယ်တော့ start3,772 -piece အစုအတွက်အလားအလာကောင်းတဲ့အက္ခရာများစာရင်းကိုအတူ ed ။
တစ်ဦးစဉ်အတွင်း လတ်တလော Q & A reddit တွင်မာ့ခ်သည်သူ၏မူလဆန္ဒစာရင်းအတွက်အသေးအဖွဲပုံစံများကိုဖော်ပြခဲ့သည် 76178 နေ့စဉ် Bugle တစ် ဦး မျက်စိ - ရေလောင်း 60 တစ် ဦး ချင်းစီဇာတ်ကောင်မှတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ “ ကျွန်မကမူလ Sinister Six လိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအသစ်တွေကကုန်သွားတယ်။ “ နာမည်အနည်းငယ်ပေးဖို့ Deadpool, The Human Torch, Iceman, Spider-Woman လိုချင်တယ် Spider-Manသူငယ်ချင်းများ။
စဉ် 76178 နေ့စဉ် Bugle Daredevil, Blade, Punisher, Firestar နှင့် Black Cat အပါအ ၀ င်အသစ်သောသီးသန့်အသေးစားဓာတ်ပုံများပါဝင်သည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောစာလုံးများစွာရှိသည်။ Spider-ManMysterio၊ Miles Morales၊ Ghost-Spider နှင့် Doctor Octopus အပါအ ၀ င်အရာများ။
မာ့ခ်၏အဆိုအရထိုထပ်ခါတလဲလဲရုပ်ပုံကားချပ်များသည် (မူလမည်သည့်ပုံစံကိုသူအတိအကျမဖော်ပြထားသော်လည်း) အမှန်တကယ်မူလဒီဇိုင်းအတွက်ဖြစ်သည် 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဒါပေမယ့်အခြားအတွက်စတင်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် Marvel ပထမ ဦး ဆုံးသတ်မှတ်။ ဒါက Daredevil နဲ့ Black Cat တို့လိုအနာဂတ်မှာစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ပေါ်လာတာကိုကောင်းကောင်းသဘောကျတယ် Marvel မော်ဒယ်လ်တွေ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့သီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး 76178 နေ့စဉ် Bugle.
ယင်းအပေါ်ပိုပြီးများအတွက် Lego Group ၏နောက်ဆုံးပေါ်စူပါဟီးရိုးအစုံ၊ ငါတို့စစ်ဆေးပါ ဓာတ်ပုံပြခန်းယူပါ နက်ရှိုင်းသောငုပ် အဆိုပါဇာတ်ကောင်များ၏ရုပ်ပြစာအုပ်သမိုင်းသို့, ငါတို့အပေါ် ruminate အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို join အရာ minifigures တစ် ဦး အစက်အပြောက်ခံထိုက် (ဘတ်ဂျက်မထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့လျှင်) 25- ခိုင်မာတဲ့လိုင်းအတွက်။ ၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်မေလ ၂၆ မှ (သင် VIP ဖြစ်လျှင်) သို့မဟုတ်ဇွန် ၁ (သင်မရရှိလျှင်) မှကောက်ယူနိုင်သည်။
← Lego Friends တီဗီရှိုး GWP ဇွန်လတွင်ကောလဟာလသတင်းများထွက်
ဘယ်ဟာ Spider-Man ရုပ်ပြ, ပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင် LEGO မှုတ်သွင်း Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle? →